Sharciyeynta Weed Caafimaad ee Thai ah Ahmiyad Dhaqaale iyo Caafimaad labadaba • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Sharciyeynta xashiishadda caafimaadka ee Thai waxay leedahay muhiimad dhaqaale iyo caafimaad
cannabisCaafimaadkaSharci dejinta & Sharci dejinta
Sharciyeynta xashiishadda caafimaadka ee Thai waxay leedahay muhiimad dhaqaale iyo caafimaad
albaabka Ties Inc. 18 May 2021
maqaal by Ties Inc. 18 May 2021
Afartii sano ee la soo dhaafay, dowladda Thai waxay dajisay dib-u-habeyn sharci-dejin si loogu dhiso suuq loogu talagalay xashiishadda caafimaadka. Iyada oo ay suurtagal tahay in la helo faa'iidooyin dhaqaale oo muhiim ah isla markaana laga caawiyo bukaannada u baahan, su'aashu weli waa: Dawladdu ma mudnaan siin doontaa faa'iidooyinka ama bukaannada?
In kasta oo labadan ujeeddo aysan daruuri ahayn inay is afgartaan, haddana waxaa muhiim ah in la fahmo sababaha ka dambeeya dib-u-habeynta si siyaasad-dejiyayaashu isugu dheellitiraan labada dhinacba. Waxaa jira caddeyn sii kordheysa oo muujineysa in caafimaadka uu yahay mid guud oo wanaagsan oo aad muhiim u ah in ay maareeyaan xoogagga suuqa. Gaar ahaan tixgelinta in raadinta macaashku ay ka soo horjeeddo mabaadi'da caafimaadka bulshada.
1 Dib-u-habeynta xashiishka Thai
2 Baahida sare ee xashiishadda caafimaadka
Dib-u-habeynta xashiishka Thai
Bishii Janaayo 2017, hemp waxaa lagu xukumay mashruuc tijaabo ah oo Thai ah Guddiga Xakamaynta Mukhaadaraadka. Bishii Diseembar 2018, Golaha Shacbiga ayaa u codeeyay Thailand loo dhan yahay oo lagu taageeray in wax laga beddelo sharciyada qaranka loona beddelo xashiishadda dawada. Bishii Febraayo 2019, xashiishka iyo soosaarida hemp ayaa laga saaray kantaroolka gobolka iyo badeecooyinka ay ku jiraan hemp ayaa dib loo soocay bishii Ogosto 2019.
Dib-u-habeyn dheeri ah sanad kadib waxay u oggolaatay beeralayda caafimaadka ee gaarka loo leeyahay inay koraan oo ay ka ganacsadaan dalagyada. Bishii Diseembar 2020, mas'uuliyiintu waxay ka saareen qaynuunnada dambiyada qaybaheeda kale ee xashiishka. Bishii Maarso 2021, Ra'iisul Wasaare Ku-Xigeenka ahna Wasiirka Caafimaadka Anutin Charnvirakul wuxuu ku dhawaaqay in qoysasku si sharci ah u kori karaan illaa lix dhir xashiishad ah.
Baahida sare ee xashiishadda caafimaadka
Xashiishadda caafimaadka ayaa baahi weyn loo qabaa bukaanka qaba 38 xaaladood oo caafimaad oo kala duwan. Saddex bilood ka hor sharciyeynta, in ka badan 30.000 oo qof ayaa isu diiwaangeliyey inay galaan iyo milyan kale oo bukaanno ah ayaa xaq u yeeshay in la isticmaalo. In kasta oo kaliya dhowr qof oo shakhsiyaad ah ay markii hore daaweyn u socdeen sababo la xiriira caqabadaha waaweyn ee oggolaanshaha bukaanka, 2019 dhalo oo saliid xashiishad ah ayaa loo qaybiyay bukaanada rijeetada bishii Ogosto 10.000. Bishii Nofeembar 2020, 14.236 bukaanno ah ayaa helay marijuana caafimaad, taas oo ka dhigan kor u kac yar oo helitaanka ah.
Xakamaynta adag ee dawladu waxay horseeday caqabado xagga shatiyada ah. Bishii Janaayo 2020, waxaa la soo saaray 442 shati oo xashiishad caafimaad ah, taas oo in ka badan 400 loo isticmaalay in lagu qaybiyo.
Akhri wax dheeraad ah eastasia.org (Source, EN)
sharci-dejintadaawo cannabisdaawada cawskaThailand
CMC ee UK waxay ku boorinaysaa…
Coronavirus wuxuu sharciyeynayaa xashiishadda cannabis gudaha…
Isticmaalka marijuana xilliga uurka waxay kordhisaa khatarta...